युट्युवका ‘स्टार’, भुइँमान्छेका ‘भाग्य’ - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७७, शनिबार ६ : २७
कामको चापका कारण भाग्य न्यौपाने राति अवेर सुतेका थिए । बिहानैबाट उनको फोन लगातार बजिरहेको थियो । त्यसो त भाग्यको मोबाइलले प्राय आराम पाउँदैन । दैनिक सयौं कलले उनको मोबाइलको घण्टी बजाइरहेका हुन्छन् ।
लगातार फोन आएपछि अर्ध निन्द्रामा भाग्यले फोन उठाए ।
उताबाट पुरुषको धोत्रो आवाज आउँछ ।
सदावाहार स्टाइलमा भाग्यले सोध्छन्
हजुरलाई के भयो ?
उमेरले ८० वर्ष पुगेका वृद्धले आफ्नो पीडाको कथा सुनाउछन् ।
त्यसपछि पनि भाग्यको मोबाइलमा थुप्रै फोन आउछ ।
भ्याएसम्म उनी उठाउँछन् ।
सबैले आफ्ना समस्या सुनाउँछन् । पीडाबारे युट्युबमा भिडियो बनाइदिन आग्रह गर्छन् ।
भिडियो हेरेर कसैले सहयोग गरिहाले आफूले भोगेको पीडामा केही मल्हम लाग्थ्यो कि भन्ने आशा गर्छन् ।
जसलाई भाग्यले अस्वभाविक ठान्दैनन् ।
तर बेला कहाँ सहज छ र ?
कसैले भनेकै र बोलाएकै भरमा भावनामा बहकेर भिडियो बनाउदाको पीडा पनि त भाग्यले भुलेका छैनन् ।
कपनको चउरमा बेबासिरस भेटिएकी भनिएकी बालिका बारे बनाएको भिडियोका कारण खाएको गाली उनको युट्युब यात्राको गतिलो पाठ बनेको छ ।
भिडियोका लागि क्यामरा खोल्नु भन्दा पहिला कयौं पटक उनी ठन्डा दिमागले सोच्छन् ।
अब फोन कल तिर फर्किऔं,
कयौं फोनहरुमा भिडियो बनाउन आग्रह गरिएपछि उनले कस्तो स्टोरीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने बारे टिमका साथीहरुसँग छलफल गरे ।
सबैले भोगेका पीडाबारे उनीहरुले छलफल गरे ।
त्यसपछि निष्कर्ष निकाले । ति ८० वर्षे बुवाको पीडालाई क्यामरामा कैद गर्ने र उनको पीडामा मल्हम लागाउन प्रयास गर्ने ।
त्यसपछि उनले ति बुवाको पीडाबारे पुन सोधखोज गरे । उनको घर रहेको स्थानीय तहको वडाका अध्यक्षसँग पनि कुरा गरे र स्टोरी गर्ने निष्कर्ष निकाले । जुन भाग्य न्यौपानेले सञ्चालन गर्ने ताततातो खबर नामक युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको छ ।
ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु भन्ने ठाउँ धेरै नेपालीले थाहा पाएको स्थान हो । नेपालका एक जना चर्चित राजनीतिज्ञ स्वर्गीय मदन भण्डारीको जन्मस्थल भएका कारण पनि ढुंगेसाँघुको चर्चा हुने गरेको थियो ।
सोही ढुंगेसाँघु वडा नम्बर २ मा भाग्य न्यौपाने २०४९ सालमा जन्मिए । बाल्यकाल ढुंगेसाँघुका पाखामा बिताएका उनी परिवार २०५६ झापा झरे ।
ताप्लेजुङ र झापामा स्कुल पढेका भाग्यले व्यवस्थापनमा स्नातक भने चितवनबाट गरे ।
स्कुले पढाइमा मध्यम स्तरका भाग्य युट्युबमा भने अव्वल सावित भए ।
कलेजको अध्ययन जारी रहँदै उनले प्राविधिक शिक्षा र ज्ञान लिनुपर्ने विचार गरे ।
त्यसपछि उनी कुलिनरी (विशेष गरि होटलको किचेन लाइन)को पढाइका लागि मलेसिया पुगे ।
विद्यार्थी भिसामा मलेसिया पुगेका उनले २१ महिना त्यहाँ विताए ।
उनको परिवार कृषिमा आश्रित छ । तीन दाजूभाइ र दुई दिदी बहिनी मध्ये कान्छा भाग्यले भने अहिले काठमाडौंलाई नै कर्मथलो बनाएका छन् ।
जेठो दाई होटलको एकाउन्टेन र माइलो दाई गाउँमा नै कृषि कर्ममा छन् ।
जीवनमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेर केही गर्ने लक्ष्य बनाएर विदेशी भूमिमा सिकेको ज्ञान र सीपलाई भने भाग्यले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।
‘अब आफूले सिकेको ज्ञान र सीपलाई पनि अघि बढाउने बारे सोचिरहेको छु,’ भाग्य भन्छन् ।
पत्रकारितामा आफू नयाँ भएको र धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेको बताउने भाग्य आफूले सिकेको ज्ञानलाई पनि त्यतिकै खेर जान दिने पक्षमा छैनन् । कुलिनरीबारे अध्ययन गरेको र त्यसको ज्ञान पनि भएका कारण उक्त पेशामा सहजता हुने अनुमान उनको छ तर थाहा छैन उनी युट्युवमा जस्तो सफल होलान् या नहोलान् । कुनै दिन उनले आफूले सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारीक रुपमा उतारे भने त्यसको सफलता र असफलता बारे उनी आफैंले निश्कर्ष निकाल्लन् । तर तत्कालका लागि उनी युट्युबमा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा भने पुगेका छन् ।
फरक क्षेत्रको अध्ययन भएपनि उनी युट्युवमा सफता हात पर्न सकिरहेका छन् । भन्छन्, ‘फरक क्षेत्रबाट आएको भएपनि युट्युवको लागि पनि म विद्यार्थी नै छु, मजा आउने रहेछ नयाँ क्षेत्रमा पनि ।’
नेपालमा युट्युव नयाँ प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालको नयाँ विधाको रुपमा विकसित भइरहको थियो । जतिबेला उनी मलेसियामा रहेका थिए ।
मलेसियामा अध्ययनमा रहेको बेलाको खाली समयमा उनी युट्युव हेर्थे, मजा लिन्थे ।
त्यसबेला धेरै विदेशमा रहने र नेपालमै हुनेले पनि युट्युव हेरेर दिन काट्ने गरेका थिए तर भाग्यले त्यससँग आफूलाई जोड्ने काम गरे ।
अरुले बनाएका भिडियो हेर्ने गरेका भाग्य उनीहरुले प्रस्तुत गरेका सामाग्री, सहयोग हेरेर प्रभावित बने र आफू पनि यस्तै केही गर्न सकिने मनस्थितिमा पुगे ।
एक डेढ घन्टाको भिडियो उनी आफै हेर्न सक्दैनन्, तर उनले धेरै नेपालीलाई सयौं भिडियो हेराउन सफल भएका छन् ।
मानिसहरुको सफताको स्टोरीमा भने उनको रुची छ । अरुले बनाएको भिडियोमा रुची भएपछि आफूले पनि त्यस्तै गर्न सके हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । आफू क्रिएटर भएर अरुलाई भिडियो हेराउने बिचार उनले मलेसियामा हुँदै गरेका थिए ।
त्यसपछि उनले युट्युब च्यानलको डोमेन रजिष्टर गरे ।
नेपालमा आएपछि कम्पनी रजिष्टारका दर्ता लगायतका कानूनी काम पूरा गरे ।
अहिले उनले सञ्चालन गरिरहेको ताततातो खबर नाम युट्युब च्यानलमा करिब २१ लाख सस्काइक्रबर रहेका छन् ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै सस्क्राइबर रहेका युट्युब मध्ये उनी चौथो नम्बरमा रहेका छन् । उनको भन्दा माथि रहेका तीनवटा च्यानल सांगितिक क्षेत्रका रहेका छन् । म्युजिक नेपाल, बुढा सुम्बा डिजिटल र ओएसआर डिजिटल पछि ताततातो खबर रहेको छ ।
समाचारसँग सम्बन्धित रहेका युट्युब च्यानलमा उनी नेपालको पहिलो नम्बरमा रहेका छन् ।
उनले बनाएका अधिकांश भिडियो हजारौंले हेर्ने गरेका छन् । ताततातो खबरको च्यानलमा अपलोड भएका केही भिडियो त लाखौंले हेरेका छन् ।
युट्युवको क्षेत्रमा नै केही गर्छु भनेर आफू विदेशबाट नेपाल आएको भाग्य बताउँछन् ।
‘कमाउनका लागि त त्यही बसेको भएपनि कमाइ हुन्थ्यो होला, तर म चाँही नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ भनेर आएको हो’ उनी भन्छन् ।
उनी नेपाल आएर युट्युब चलाउन थालेको साढे तीन वर्षमात्र भयो । यो छोटो अवधीमा उनी सफतातर्फ अघि बढेका छन् ।
तर भाग्य यसलाई सफलता भन्दा पनि इमान्दार प्रयासको रुपमा लिन्छन् ।
‘म सिक्दै छु । यो सफलता पनि होइन प्रयास मात्र हो, भाग्य भन्छन् ।’
नेपालीको भिडियो बनाउनका लागि उनी पोर्चुगल, जर्मनी फ्रान्स, बेल्जियम कोरिया लगायत विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका छन् ।
देशमा सञ्चारका कयौं माध्यम छन् । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाईनको संख्या अनगिन्ति छ । त्यस्तै युट्युव च्यानल पनि हजारौंको संख्यामा छ ।
तर यो भिडमा उनी धेरै भुइमान्छेका लागि भाग्य नै बनेर उदाएका छन् ।
भुइमान्छे, जसको आवाज आम रुपमा मानिसहरुकहाँ पुराउने काम उनले गरिरहेका छन् । दुख पाएकाहरुलाई आफू र आफ्ना माध्यमले धेरै सहयोग भाग्यले गरेका छन् ।
‘त्यस्ता व्यक्तिका घरमा र समाजमा पुगेर क्यामेरा खोल्यौं जहाँ कहिल्यै सञ्चारमाध्यम पुगेका थिएनन्,’ भाग्य भन्छन् ‘हामीले कन्टेन्टमा जोड दियौं । समाजको र व्यक्तिले चाहेको विषयमा रिपोर्टहरु बनायौं ।’
कयौं दुख पाएका र पीडित परिवारलाई उनले युट्युवको माध्यमबाट सहायता गर्दा उनीहरुले भाग्यलाई आशिर्वाद दिन्छन्, माया गर्छन्, स्नेह दर्शाउँछन् । बस भाग्यलाई त्यतिले आनन्द दिन्छ ।
जीवन सार्थक भएको महसुस हुन्छ ।
दुख पाएका, उपचार गर्न नसकेकाको पीडामा मल्हम लगाउन पाउँदा उनी खुसी छन् ।
आर्थिक सहयोग र पारदर्शिताको प्रश्न
उनका अधिकांश भिडियोमा केही न केही ‘अस्वभाविक पीडा’ भोगेका व्यक्तिको कथा हुन्छन् । दुखः पाएकालाई सहयोग गर्न उनले भिडियोमार्फत आह्वान गर्छन् ।
पीडितको वा उनको परिवारको कसैको मोबाइल नम्बर उपलव्ध गराउँछन् । विदेशमा रहेका र नजिक रहेका कतिपयले भने भाग्यलाई नै पैसा उपलव्ध गराउँछन् ।
अहिलेसम्म यसरी आफूले पीडितलाई उपलव्ध गराएको रकमको हिसाब भने उनले राखेका छैनन् ।
‘हरेक जसो भिडियोमा हुन्छ । अहिलेसम्म कति बाँडियो भन्ने बारे रेकर्ड राखेको छैन । तर अब राख्नु पर्नेछ’ , भाग्य भन्छन्, ‘६, ७ सय भिडियोमा हरेकलाई सहयोग उठेको छ, कतिलाई दिइयो भनेर भिडियोबाट निकाल्नुपर्छ ।’
आफूहरु शिकारु भएको र शुरुमौ आफूहरुले त्यसबारे ध्यान दिन नसकोे उनी स्वीकार गर्छन् ।
बेलाबेलामा यसरी उठाउने रकमको आर्थिक पारदर्शीताबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भाग्य भने आफूहरुले सकेसम्म रकम नउठाउने तर आफूहरुलाई नै दिने सहयोगी मन भएका कारण त्यसलाई टार्न नसक्ने बताउँछन् । त्यस्तो रकमबारे आफूहरुले दाताको नाम भिडियोमासमेत उल्लेख गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
लकडाउनको समयमा पनि भाग्यको टोलीले धेरैलाई राहत बाँड्यो । खान समस्या भएकाहरुलाई दाल चामल पुराउन उनीहरु दैनिक खटिए ।
१ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल झापा पुगेर बितरण गरेको उनी सुनाउँछन् ।
‘लकडाउनको समयमा काठमाडौं र देशका विभिन्न भागमा दैनिक सहयोग गर्यौं, त्यसका लागि सहयोगी मनहरुको सहयोग प्राप्त भएको थियो’, भाग्य भन्छन् ।
विकाउ स्टोरी र कमाइ
युट्युवरलाई धेरै कमाइ हुने र विकाउ खालको स्टोरी बनाउने भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ ।
भाइरल कन्टेन्टको पछि लाग्ने र एकै विषयमा दर्जन बढी भिडियो बनाउने युट्युबरको संख्या कम छैन ।
तर आफूहरुले भने त्यसो नगरेको उनी दावी गर्छन् ।
दुई वटा क्यामेरा पुगेको स्थानमा आफूहरु नपुगेको उनी बताउँछन् । आफूहरुले उठान गरेको विषयमा अरु च्यानहरुले लगातार भिडियोहरु बनाएर भाइरल बनाउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।
भिवरको आधारमा पैसा आउने र युट्युवरहरु त्यसकै पछि लाग्ने गरेको आरोपलाई भाग्य स्वीकार गर्दैनन् ।
भिवरका लागि मात्र काम गर्ने भए दैनिक दुई तीनवटा क्यामेरा लिएर कुद्ने हो भने पर्याप्त स्टोरीहरु भेटिने उनी बताउँछन् ।
‘भिउजको हिसाबमा जाने भए त, हजारौं फोन आउथ्यो त्यसकै पछि लागे हन्छ तर हामीले त्यसो गरेका छैनौं,’ उनी भन्छन् ।
उनी थप्छन्, ‘हामी अरुले भाइरल बनाएको ठाउँमा जाने भए भिउज त हुन्थ्यो । दुई वटा क्यामरा किनेर पठाए टन्न हुन्थ्यो । हामी अरुको क्यामेरा पुगेको स्थानमा सकेसक्म पुग्दैनौं ।’
भिउजका लागि मात्र लाग्ने भए काठमाडौंबाट बाहिर जानु नै नपर्ने उनी बताउँछन् ।
तर आफूहरुले कहिल्यै क्यामेरा नपुगेका बस्ती र गाउँमा गरेर क्यामेरा खोल्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् ।
‘उहाँहरुका दुख पीडा र समस्यालाई हामी आम रुपमा ल्याउन चाहन्छौं । जहाँ राज्यको नजर पुग्न सकेको छैन त्यहाँ हामी पुग्न चाहन्छौं,’ भाग्यले भने ।
मिडियामा आएपछि सहयोग गर्ने ट्रेन्ड पनि नचलेको होइन नेपालमा । व्यक्ति एक्लैले गर्न नसक्ने कतिपय अवस्था हुन्छन् जसमा भाग्यहरुको योगदान उच्च हुन जान्छ ।
युट्युव यात्राका क्रममा अधिकांश जिल्लामा पुगेका उनी कमाइको लागि मात्र भिडियो बनाएको आरोपबाट दुःखी हुन्छन् ।
‘कमाइको हिसाबमा मात्र हेर्थ्यौंं भने काठमाडौं मै बसे हुन्थ्यो नि । यहाँ सबै जिल्लाका र दुःख पाएका मानिस पाइन्थो, तर हामीलाई किन बाजुरा जानु परो, किन ताप्लेजु पुग्नु परो,’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्,‘हामी देशका विभिन्न स्थानमा दुःख पाएका आमा बुवा, दाजु, भाइ, दिदी बहिनीको पीडालाई कम गराउन चाहन्छौं ।’
काम गर्दा गल्ती भयो भने त्यसबाट सिक्ने अवसर बन्ने कुरामा उनी विश्वास गर्छन् ।
‘आरोप लागेन भने सिक्ने अवस्था बन्दैन । कसले कसरी सोच्छ भन्ने हुन्छ । कर्म गर्दै जानु पर्छ, हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।
आफूहरुले सबैलाई समेट्न नसकेकोमा उनी सन्तुष्ट छैनन् ।
धेरैको आशलाई निराशा बनाउन परेकोमा उनी दुख मान्छन् । धेरैले गरेको फोन र अपेक्षालाई उनी पूरा गर्न सक्दैनन् ।
‘तीसौं हजार मिर्गौला पीडित हुनुहुँदो रहेछ, हामीले केहीको मात्र स्टोरी गर्ने हो, धेरैले मेरो पनि गरिदियोस् भन्ने ठान्नु हुन्छ तर दैनिक त्यही गर्ने कुरा पनि भएन,’ उनी भन्छन् ।
उनले उठान गरेका धेरै पात्र अहिले चर्चामा छन् ।
गाउँमा गीत गाउँने अशोक दर्जीको भिडियो पहिलो पटक भाग्य न्यौपानेले ताततातो खबरबाट गराएका थिए जो कुनै समय निकै चर्चामा रहेभने उनको जीवनमा परिवर्तन आयो । कमला घिमिर, सुनिल सिदाल, अंकित परियार, चन्द्रवीर ओली लगायतको स्टोरी उनले गरे ।
भाग्यले करिब ७ सय भिडियो बनाए । सबै स्टोरी विशेष हुने भएपछि नै उनले छनोट गर्ने गरेका छन् । तर उनलाई सबैभन्दा बढी मन पर्ने भिडियो कुन होला ?
उनी भन्छन्, ‘सबै विशेष नै छन् । तर मलाई चन्द्रवीर ओलीको स्टोरीले छुन्छ ।’
‘दृष्टि विहीन भएपनि ७२, ७४ वर्षको चन्द्रवीरले दुई किलोमिटर बाटो खन्नु भएको थियो । आफू मरेर गएपनि आफ्ना अन्य दुष्टिविहीन सन्तान भीरबाट लडेर नमरुन् भनेर उहाँले त्यसो गर्नु भएको थियो । त्यसले मलाई छुन्छ,’ आफैले बनाएका भिडियोबारे भाग्य भन्छन् ।
साढे तीन वर्षे युट्युव यात्रामा भाग्य सेलिब्रेटी बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनलाई पछ्याउनेको संख्या ठूलै छ ।
नाम र दाम दुबै कमाएका भाग्यलाई सार्वजनिक रुपमा भेट्दा सेल्फी खिच्ने र टिकटक भिडियो बनाउनेको लाइन नै लाग्छ ।
आफूलाई मानिसले पछ्याउँदा उनी खुसी हुन्छन् ।
‘सबैले माया गर्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ,’ हाँस्दै भाग्य भन्छन् । सबैको मायाले जिल्ला जिल्ला पुग्न र काम(कर्म)मा निरन्तर लाग्न अभिप्रेरणा मिल्ने उनी बताउँछन् ।
तर सधैं यस्तो हुँदैन ।
कहिले कही सानो गल्ती र कमजोरीका कारण पनि आलोचना र गाली खान सार्वजनिक व्यक्ति तयार हुनुपर्छ ।
त्यस्ता गल्तीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
यस्ता गल्तीलाई सुधार गरेर जान र आगामी दिनमा थप सचेन हुन जरुरी भएको उनी बताउँछन् ।
कपन चउरमा भेटिएकी बालिका प्रकरणमा बनाएको एक भिडियोलाई लिएर भाग्यले ठूलै आलोचना खेप्नु परेको उनले बिर्सिएका छैनन् ।
बालगृह प्रकरणबारे उनीसँग प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘भो त्यसबारे कुरा नगरु, त्यो घटनालाई त म सम्झन पनि चाहन्न ।’
सम्झिउन् पनि कसरी ?
युट्युबरको रुपमा रहेको उनको छवि धुमिल बनाउन खोज्यो उक्त प्रकरणले । पैसा कमाउनका लागि भिडियो बनाएको आरोप लाग्यो, महिलासँग टासिएको आरोप लाग्यो जसको उनले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् ।
‘गल्तीबाट सिक्दै जानु नै जीवन रहेछ,’ भाग्यले भने, ‘भिरकोबाटो सजिलै हिडियो, सम्ममा लडियो भनेको जस्तो भयो ।’
बालिकाको अवस्थालाई देखाइदिन बारम्बार फोन आएपछि आफूहरु कपन पुगेको र अवोध बालिकालाई देखेर चुकेको उनी स्वीकार गर्छन् ।
‘त्यसपछि थाहा भयो क्यामरा खोल्नु अघि दिमाग खोल्नु पर्ने रहेछ,’ भाग्यले गम्भीर हुँदै भने ।
यी र यस्ता केही नराम्रा घटनाका आधारमा मात्र युट्युवरलाई गाली गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।
‘काम गर्दै जाँदा कहिले कहाँ गल्ती हुन्छ, त्यसलाई सुधारेर आगामी दिनमा गल्ती नहुने गरि अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ तर कर्म निरन्तर गर्नुपर्छ,’ भाग्य भन्छन् ।
युट्युवमा आउने कन्टेन्ट सबै राम्रो र खराबै मात्र छ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
‘युट्युवब एकदम राम्रो छ भन्नपनि मिल्दैन, खराब छ भनेर एकदम खराब छ भन्न मिल्दैन’ उनी भन्छन्, ‘टेलिभिजिनको, अनलाइनको युट्युब छैन र ? सबैलाई युट्युबर भनेर गाली गर्ने त त्यसो भए ?’
पछिल्लो समय सस्तो र विकाउ खालका कन्टेन्ट बनेको उनी स्वीकार गर्छन् । तर त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नु पर्ने र राज्यको तहबाट त्यसमा नियमन हुनुपर्ने उनको मान्यता छ ।
‘जब कुनै चिज विग्रन्छ नि त्यसपछि त्यसमा सुधार हुन थाल्छ । नियम राम्रो बनोस्, युट्युबरलाई तालिमको होस् भन्ने चाहन्छौ हामी,’ उनी भन्छन् ।
त्यसो त मुलधारका सञ्चारमाध्यम नपुगेका कतिपय घटनामा युट्युबर पुगेका छन् । ओझेलमा परेका समाचारहरुलाई बहस हुने अवस्था सम्म पनि उनीहरुले भिडियोका माध्यमबाट लगेका छन् ।
‘मेनस्ट्रिम नपुगेको ठाउँमा पनि युट्युवहरु पुगेका छन् । नराम्रो मात्र भएको छैन राम्रो पनि भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
युट्युव इन्टरनेटको माध्यमबाट हेरिन्छ । यो विश्वमा नै यस्तै खालको छ, त्यसैले व्यक्ति स्वयंले कस्ता खालका सामाग्री हेर्ने भन्ने चयन गर्नसक्नुपर्छ ।
एउटा पसलमा राखेका सबै सामाग्री गुणस्तरका हुँदैनन् त्यतिबेला ग्राहकले त्यहाँ भएका मध्येबाट राम्रो छान्ने गर्छ, युट्युव पनि एकप्रकारको पसल जस्तै हो जहाँ दर्शकले राम्रो मात्र छान्न सक्नु पर्छ ।
त्यसपछि आफसे आफ नराम्रा सामाग्रीहरु विस्थापित हुँदै जाने भाग्यको विश्वास छ ।
पैसाका कमाउनका लागि मात्र सस्ता र लाजमर्दा भिडियोहरु युट्युबरले अपलोड गर्ने गरेका आरोप पछिल्लो समय लाग्ने गरेको छ ।
तर भाग्य भने नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिले युट्युव चलाएर जीवनै फेरिएको आफूले नपाएको बताउँछन् ।
‘धेरै कामाइ हुने भएको भए युट्युबरको लाइफ स्टाइल चेन्ज हुन्थ्यो, खै मैले त्यस्तो पाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अरुले दुई रुपैयाँ कमाउँदा हजारै कमायो भनेर हेर्ने हो भने फरक कुरा तर युट्युब कमाइ गर्ने भन्दा पनि राम्रो पेटफर्म हो ।’
युट्युबबाट सेलिब्रेटी बनेका भाग्यलाई पछ्याउनेको संख्या धेरै रहेको बारे यो आलेखमा पहिले पनि उल्लेख गरिएको छ ।
उनलाई पछ्याउनेको संख्यामा युवतीहरु पनि धेरै छन् । टिकटकमा कतिपयले उनको नाम जोडेर भिडियो बनाएका छन् । कतिपयले उनको नाममा टाउको फुटाउनेसम्मका हत्कण्डा गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक नभएका होइनन् ।
धेरैले उनी प्रेम सम्बन्धमा रहेको अनुमान गर्छन् कतिले त उनीसँग प्रश्न पनि गर्छन् ।
सबैलाई दिने उनीसँग रेडिमेड जवाफ छ ।
अहँ छैन नी..
विवाह गर्ने उमेर पुगेको युवा त्यसमा पनि सेलिब्रेटी युट्युवर, किन नहोला अफेयर ? अधिकांशले दोस्रो पटक सोध्ने प्रश्नको उनले धेरैपटक सामाना गरेका छन् ।
उनी हाँस्छन् र फेरि भन्छन्, साँच्चि छैन क्या…
सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय दिन नभ्याएका कारण प्रेममा नपरेको उनी सुनाउँछन् ।
‘सामाजिक सञ्जालमा ध्यान दिन भ्याएको छैन । जतिसक्दो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने मा छु । त्यसैलाई ध्यान दिएर लाग्यो भने लभ त पर्छ नि, तर फुर्सदै हुँदैन,’ भाग्यले हाँस्दै भने ।
अन्तिम प्रश्न, बिबाह चाँही कहिले गर्नुहुन्छ त ?
भाग्यको जवाफ : अब चाडैं गर्नुपर्छ ।